Alshabaab oo Qorsheeyey Dulaan ay ku qaadaan Hobyo - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Alshabaab oo Qorsheeyey Dulaan ay ku qaadaan Hobyo
Alshabaab oo Qorsheeyey Dulaan ay ku qaadaan Hobyo
July 15, 2018 admin569
Ururka Alshabaab oo Gobolka Mudug ka joogga degmada Xarardheere kaliya, ayaa hadda doonaya in maamulkiisa ku balaariyo degmooyin iyo deegaano cusub ee gobolka Mudug.
Xog Sirdoon oo ay heshay shabakadda Ceelhuur.com ayaa sheegaya in Alshabaab dhameystireen qorshe ay doonayaan in ay dulaan balaaran ku qaadaan Degmada Hobyo, Alshabaab ciidan ayaa farabadan soo dhoobay Dhulka Howdka ah ee Degmada Xarardheere. Waxaana dadka deegaanka inoo xaqiijiyeen in Xiliga Habeenkii Gadiid sida ciidan ay u soo gudbaan dhanka Degmada Xarardheere.
Xogtaan ayaa intaa ku daraysa in Ciidanka Shabaabka ee duulaaankan ka qeybgalaya laga kala keenay Jabhadaha Gobolada Hiiraan, Shabeelaha Dhexe iyo Galgaduud. Waxaana Alshabaab u qorsheeyeen ii duulaankaan ka qeybgalayaan ciidan gaaraya 1000 Askari.
Sidoo kale 11 July 2018 Fariin Cod ah oo laga sii daayey idaacadda Andalus ee ku hadasha Afka Alshabaab ayaa waxaa ka hadlay Mahad Warsame (Mahad Karatee) oo ka mid ah Saraakiisha ugu sareysa Alshabaab, Mahad Karatee ayaa sheegay in joojiyeen waddo ay isku xiraysay itoobiya iyo Hobyo, Wuxuuna si gaar ah uga hadlay arinta dekadda Hobyo.
Sidoo kale ilaha xogtaan nala wadaagay ayaa sheegaya in Alshabaab inta aysan duulaanka qaadin heshiis la galayaan beelaha degga deegaanada u dhaxeeya Xarardheere iyo Hobyo, Qorshaha shabaab ayaa kusoo aadaya iyadoo dhawaan ay Hobyo tageen wafdi ka socda Dowladda Qadar oo doonayey in ay maalgashtaan dekedda Hobyo.
Alshabaab ayaa u arka furitaanka dekadda Hobyo caqabad weyn oo kusoo foodleh, waxayna qiyaasayaan inta aan la bilaabin dhismaha Dekadda in maamulka Galmudug ku qasban yahay inuu xoreeyo Xarardheere si ugu yaraan looga gaashaanto weeraro lagu carqaladeynayo Dekedda Hobyo.
Wasiirka Amniga “Dadka ka hadlaya jidadka xiran Al-Shabaab ayaa ka hadalsiinaya”
Xisbiyada Mucaaradka oo Cambaareeyey Xadgudubkii Farmaajo u geystay Walaalaha Jabuuti
Madaxweyne Farmaajo Oo Jubba Kula Kulmay Dhiggiisa Suudaanta Koonfureed.